Dhaabbileen Oromoo Miseesnsoota waraaqa qoofa ijarun waliin soochoo’uu qabu.
Guyya Amaharii fi Afaan Amahara olantuman isaan Oromoo irra buqa'aan ni dhufaa !! Fakadu Yadessaa Loltuu ABO diiree irrati wareegamtuu kana jeedhe.
Dhimmi kun hojii qoorannoo dheera fudhatee yoo ta’ee ilee akka dubistoon keenya hin nufineeti gagababsine dhiyeesina. Dargagoon amma waan dheeraa dubisuuf feedhii akka hin qabnee fi ofilee hojii qoorannoo dheeraa kan barreesuu murasa waan ta’eef waan qoophesine keessa murmure waan dhaabilee fi dargaggoota Oromoo ni gargara jenee isiini dhiyessuu yaale, kanafuu bakka tokko tokkotti utuu gadii fagenyan hin ibsin biraa darbuuf dirqamne.
Qabsoon riiphee lolan (liberation front) geggesuu fi partiilee qabsoo kara nagga geggesanin takkumma wal fakachuu fi walfakeesuu waltimakani deemun dogoggra qaba.
Lachuu addan basuun fi amala hojii isaan beekun dirqama. Warii Paartii kara nagga qabsa’aan waraa wal gurmeesan kara nagaan Angoo qabachuuf deeman yamuu ta’uu, warii kun seera biyyatti fudhatani, dhaabbilee biroon wal dorgomani angoo qabachuu dha. Isaaniyuu bakka lamatti hiraamu Warii tokko gartuu sooresa deggeran akka Republicans (USA), N-VA (Belgium), UK Conservative Party kkf sooresota gurmessun isaan irra mallaqaan deggeramani mirga sooresa kabachiisuun angoo biyyati irra turu. Paartilee USA fi Eurpoa keessa jiran ilee gartuu dhabbiichaa deggeran miseensa Hortani Angoo qabatani miseensoota fi deggertoota isaan caalatii tajjajiluu. Fakeenyaf biyya Belgium Keessatti Partin N-VA jeedhamu Nannoo Filamish (Oromiyyan wal fakatuu) Soresoota Filamishi caalaatti akka soroman kan falmatuu yeeroo ta’uu hiyeessi hundi nama biyya alatti dhufe jeedhee waan yaaduuf hiyeesa midhudhan beekama. Paartileen akkassi kun miseensi isaan faayidaa dhaabba sana irra argatu ilaale duka hirriraa, paartileen biroon immoo mirga Hiyeessa kabachisuuf yemmuu soco’aan hiyeessa, daafqan bula fi qootate bula gurmeefachuun angoo fudhachuu yaaluu.
Fakeenya TPLF kan qabsa’eef Bilisummaa ummataf utuu hin tanee Gartuun tokko wal gurmesee angoo qabatee waan hunda fayyida dhuunfa misiseensoota isaaf olchuu dha. Gaafa laga jiran ilee Ciirachaa Keeshaati Gutaani Midhan ummataf binera jeedhani USA fi EU irra mallaaqa guracha turan. Achii kaassani malamaltuuma fi samiicha baratani wal barsisan hara gartuun Mafia TPLF Ethiopia samaa jirti. Warii Qabsoo Bilisummaa ummata isaanfi falmatan Waraaqtoon akka Baroo Tumsaa, Cheguvera, Fidel Kastro, Nelson Mandela fi Patrisa Lumuba faa ammoo Mulatii isaani Angoo, Fedhii dhunfa, Qabeenya horchuu, malamaltuumaa, ayyana ilaalatumaa, leelistumaa amantaa kkf irra ala kan ta’ee amala Waraaqa qabu. Ofi du’aani ummata isaani bilisa basuu, ofi bela’ani jaala isaani beela basuu, of wareegaman qabsoo isaan achii tarkanfachisu qoofa. Sababin isaa waraaqan amala kana qabachuu qaba. Kanafuu adeemsaa kana qoortan laphee/onnee of waliin mari’atani qabsootti senuun murtesadha. Miseensi horanuus amala waraaqa isaa jeenuu kan gutuu ta’uu qaba.
Siyyasii amma adeema jiruu hundi wal laqee jira, sabababin isaa waan arginuu irra dogoggora heeduu hubacha jira. Kana yeeroo yeeron of xinxalee of siiresuu qabna.
Qorannoo keenya keessatti waan xinxalaman keessa Fakeenya dhaabbilee riphee lola tokko tokko ilaalee keessa gababatti akkasi jeechuu dandeenya. Warii Bilisumaa ummata issanfi qabsa’aan “National liberation front) fakeenyaf:- The African National Congress (ANC) 1912, South West Africa People's Organisation (SWAPO) 1960, The Zimbabwe African People's Union (ZAPU) 1961 by Joshua Nkomo and The Zimbabwe African National Union 1963 by Robert Mugabe, The Palestine Liberation Organization (PLO) 1964 Ideology Palestinian Nationalism, The Kurdistan Workers' Party PKK 1978, Kurdish Nationalism - Liberation, OLF/ABO 1973, Ideology Oromo Nationalism and liberation of Oromia, The Liberation Tigers of Tamil, or Tamil Tigers, Sri Lanka1980,heedun isaa kayyoo fi adeemsi isaan walfakataa, dhaabbileen kun biyya isaan keessatti qabsoon Bilisumma geggefama ture hunda wal biraa qaban ilaalun fi hanqina fi dandeeti isaan wal birra qaban xinxaluun adeemsa ofi siirefachuun gariidha. Dhabbilee Ethiopia akka TPLF fi EPRP irra waan baratamu tokko iyuu hin jiruu jari kun Kayyoo haqa, mulata fi galma ga’uuf deemanf ilee hin qaban, kayyoon isaani gartuun ijaramee kun wareegama fi humna nama birrati badii kami ilee raawaachun ofi fi gartuu isaa gurmsuuf caaraa Samichaa umuuf dha. TPLF Dhaabba mafiya utuu hin tanee yeeroo ummanii million 17 beelan dhumataa jiru kana keessa Ogannoon TPLF ammoo mallaaqa Billioonan banki alati yeeroo guratan caalisee hin ilaaluu ture, hundi isaan iyuu samtuu waan ta’aanf. Kanafuu gaafi tokko hundi isaan iyuu wal qixee gaafatamu lubun ummataa beelan dhumaa jiru kun iyyatee isaan saxilaa.
Yeroo amma kana seera ittin paartileen kara nagaa USA kessatti miseensa horatan fi ittin of ijaranin riphee lola warii ijaruu barbadan jiru. Kun garuu wal hin simatuu, warii Qabsoo Bilisummaa ummataaf lolan seera adda qabaachu qabuu, partiin warii kara nagaa qabsa’aan angoo qabachuuf deeman ammoo amala adda qabuu.
Dhaabilee Oromoo Qabsoo hidhannoo geggesaa jiran kara siiri irra ijuu? Kan jeedhu sababa isaa waliin ilaaluu qabna. Sirii ta’u isaa mirkaneesuuf sababa 100 dhiyeesuu ni dandeenya, garuu kana keessa waan lama qoofa yoo caqsine nu ga’aa innis:- 1. Nafxanya Haraan(Tigiren) kara nagaa angoo Uummata sanaaf gadii hin dhiftuu sababni isaa dururman dhaabaa ummataf dhabatee utuu hin tane dhabaa samee gartuu isaa jirachisuuf dhaabatedha. Umurii isaan gutu Uummata gowomsa samani jirachuuf murteefatan jiru, kanafuu akkata dhuufan qoofan meeshadhan ari’atamuu qabu.
2. Nafxanya Mofan (Amhara) ammoo amalee waggota 150 booda akka minilik itti yaaduu sanati yaaduu, kana mirkaneefachuu yoo barbadan, gaafi fi deebii Andargachew Tsge, Tekle yeshaw fi Yilkal Getinet qoofa dhageefachuudha,
ድሮም ገጠር ውስጥ ኦሮምኛ ይናገር ነበር አሁንም ይናገራል፡፡ ድሮም የከለከለው የለም፣ አሁንም ምንም አላገኘም፡፡ ተራ ፕሮፓጋንዳ እንጂ መሬት የያዘ ምንም ነገር የለም፡፡ Waluma galatti Oromoon Habasha waliin waan irratti wal amanuu tokko ilee hin qabuu, Oromoo qaqaliin Habasha amanani waliin hojeechuu yaalan hundi dhumni jiru, Dr. Haile Fida, J/Damese Bultoo, Hailuu Garbaba, Mitiku Tarfasa, Dr. Mekoonin Jote, J/Marid Nuguse, kkf kumataman dhabnee jira, kana booda Oromoof du’uu qabna, diinaf hojeene dunee seenan keenya bakka hundati dhokachuu hin qabu, nu Oromoo tanee du’uuf murtefanee jira. Barbaran habasha jala adeemne saba keenya ajeesisu hin feenu.
Dogoggora murasa nu Dhaabbilee Bilisummaa Oromoof qabsaa’an irratti arginee keessa:- Oggannii biyya alatti bayachuu, Nama ogganna ta’uu muxannoo isaa, amala waraaquma isaa yeroo fudhatan utuu hin madalin kara irra qabani Oggana Olana goochun dadabalee mulatee jira, kun ammoo Ogannoota Buleeyii jireenya isaan hunda dhaabbaf hojeetan jijjiruun isaan mufachisee jira, kana qoofa utuu hin tane namoon bakka isaan bu’an kun ammoo yeroo murasaa kessatti dhaabba kara irratti dhisaani diinati yeroo galani argina. Kan jeechun keenya dargaggoon Ogganna Olana hin ta’iin jeechuu keenya miti, yeroo dheera wara duduben isaan hundi qooratamee beekamuu, wara qabsoo diinati hin guguree ta’uu qabu jeechuu keenya.
Miseensii Qabsoo waraaqisa geggesuu waan ittin madalamuu siiritti ol ka’uun barbachiisadha:-
Fayida dhunfaf kan hin fignee ta’uu qaba, namni fayida dhunfaf figuu gaafa fayyida argatee miseensoota ykn jaalan isaa gurgura,
Angoof kan foolatuu ta’uu hin qabuu, amali akkasi egeren isaa nama abbaa hiree ta’uu ta’aa yoo angoo argatee, ykn ammoo angooof jeecha jalan isaa jeeqa jirata,
Amantaa kami iyuu kan hinleelifnee ta’uu qaba, namni amantaa leelisu bayyisu nama ofiti amanuma hin qabne, nama waan arguuti jirachuu dhisee waan hin argini haawuu fi abjuun isaa fajaachuu ta’aa,
Malmaltumaa irra kan ofi qulquleese ta’uu qaba, Missensii qabsoo keessatti malmaltuman adeemuu egalee dhabba isaa ni balessa, yoo milka’an ilee dhaabbi sun dhaaba malmaltuuma kayeefatee ta’aa akka TPLF
Ayyanailaalatuma hojii qabsoof fara, kan wal amantaa nama dhorkuu, shakii, onne gutuun hojeechu dhabuu, dabarsan wal lachuu fida, karati nama dhisaan gara mani ho’itete deemuu fidaa,
Ganduman mallatoo dandeeti dhabinsatti ykn hanqina Oganuma dhaabuuti. Ganduma (Gartuman) gurmuu tokko keessatti yoo dhalatee akka kanseeri gurmuu sana nyate fiixa, ganduman samuu misseensa keessa baduu qaba.
Hojiin madalamuu, Hojii kenameef raawatee kana hojii sana gamagamsisuu ta’uu qaba. Asii irratti Gamgama jeechun akka TPLF nama gamagamuu utuu hin tanee karroora hojii nama sanati keename rawwii isaa gamagamuu jeechuu dha.
Miseensa akkasi kan horchuuf yoo xiiqatee wagga tokko gutuu Seena, Heera fi Seera, Namusa, Icciti eguu, kayyoo fi tarsimoo sadarka sadarkan barsisuu, dabalata yeroo kadhimamuma keessati dirqama hojii fudhatee ittin madalamuu hojeechisuu leenjifamee amala isaa hundi beekamu qaba. Qabsoo Bilisummaa geggesuun wareegama gudaa waan qabuuf of egannoo guda qaba.
Sababin isaa Miseensii qabsoo Bilisumma geggese iciiti basuun lubu qabsa’oota heedu galafachuu mala, fakeenyaf Miseensi OFC tokko yoo TPLFti galee bala inni fiduu salphadha, iciiti inni dabarsu murasa, kan ABO garuu iciiti miseensa, iciiti WBO, soochii biyya kessaa gaga’uu maluu kkf hunda diinaf yoo latee gaga’ama gudaa qaba. Kana Jeechun Paartiile kara nagaa qabsa’aan Iccitii isaa siirti egachuu , miseensa isaa siirti egachuu fi gamagamuu hin barbaachisuu jeechuu keenya miti. Bala ykn rakko dhufu waliin madaluuf jeeneti malee Namusa fi heera fi seera, iciiti eguun jirachuu qaba. Dhaabbileen Oromoo dhaabilee biro waliin hararii isaan qabachuu qaban fi akka Oromoo hoola isaa wal ijaruu qabuu yeero birra itti deebina.
Dubartiin Oromoo seena Oromoo keessatti ga’ee gudaa qabdi, qawwee diinaaf latee hin beektu Dubartoota dhiiraa caalaan Akka Asili Oromoo faa heedu qabna kan jeechi isaan lafa hin bune, dubartatoota Oromoo hayuu ta’aan keessa tokko dhamsa isheen qabsa’ootaf dhamtee akkas jeedha.
“Midiyaan biyya alaa kun waa’eedhuma masters plan Finfinne kana irratti hagam hojjetaa jira laata duukaa bu'ee rakko Maaster Plaanin kun fiduu Uummataaf saxiluu qaba jeedha. Midiyaan biyya alaa hundi qoteebulaan irratti yoo hojjetan bu'aan isaa jabaadha. Qoteebulaan diduu qaba. Qe’ee isaa irratti falmachuu qaba. Barattootaa fi dargaggota qofa irratti dhiisuun sirrii miti. Abbadhumtu lafaa isaa irratti dura bu’ee falmachuu qaba. Kanammoo irra caalaatti midiyaan Oromoo Uummata kakaasuun dirqma isaa ba'uu qaba. Dargaggoo Oromoos adeemsa siyaasaa fi toftalee qabsoo biyyotni adda addaa itti milkaawani hayyooni Oromoo barumsaa fi muxannoo ga'aa qaban akka barsiisan Sagantaalee dargagoo mijeessuu qabu. Dargaggo fi qoteebulaa irratti hojetamuu qaba. Wayyaaneen yeroo ammaa kana 5:1 isaa jedhu irra darbite 1:1 niin ummata jala ademmaa jirti. Kanaaf ummatni biyya alaa kun yomiyyu caalaa hojjechuutu irraa eegama. Diasporan Oromoo biyya demokrtawwa keessa jiratee siirna Abba Hirree wayyane /TPLF degerun Oromoo hunda gadisisee jira, garuu hamilee qabsa’aatoota goocha diaspora Oromoo kana riifatee qabsoo irra qoolfachuu hin qabu. Diyaasporaan warra bara dargii fi bara H/silaasee biyyaa baate hundi ishee iyuu samu bara sanaatiin yaaddi. Waa’ee angoo malee waa’ee mirga namaa tasa iyyuu yaaduu hinfeetu. Kaanimmoo wara qabsoo Oromoo ganee fi wara egee sa'aatti raratee biyaa baatee maqaa QBO tiin waraqaa argate qabsaa'ota ofi taasisuu yaalani dha. Wari haqa qabu wara biyya keessatti diree irra qabsa’a jiranidha” jeechuun nuuf dhamtee jirti addee (S.A). Dhamsa ishee kanan median Oromoo fi dhaabbilee Oromoo diaspora Oromoo ittin of iaaluu qabuu.
Oromoon wali mari’achuu qaba malee gara mani hooiteti deemee Habasha birrati icciti of odeesuu hin qabuu, Oromoon waan dubatuu fi bareesuu ilee afaan diini dhaga’uun ta’uu hin qabuu. Dhaabbilee Oromoo icciti miseensooota fi deggertoota isaanf dabarsan hunda kara dhoksa ta’een tu’uu qaba, Emailn, Bilbili, FB, skypen, kkf hundi akka diini caaqasuu beekuu qabu. Ta’uu ilee karan ittin erga dabarsan heedutuu jira, beektoonICT heeduu qabna, waarii dandeetii qabdan dandeetii keessa Oromoof olcha TPLF kufun ishee hin oluu muka kufa jiru hin yaabina.